Nhọrọ 5 kachasị mma na Instagram | Androidsis
Aaron Rivas | | Foto, Noticias
Instagram Ọ bụ otu n'ime netwọkụ mmekọrịta kacha eji eme ihe n'ụwa. Tinyere Facebook na Twitter, ọ bụ otu n'ime ndị kacha ewu ewu n'etiti narị otu narị na puku puku nyiwe ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere ọ na -abụkarị onye ọ bụla nwere akaụntụ na saịtị a taa na ọtụtụ afọ ugbu a, nke bụ n'ihi na na 2021 enwere ihe karịrị nde ndị ọrụ 1,200 na -eji ya.
Naanị otu ọnwa, Instagram na -achịkọta ihe karịrị 100 nde ndị ọrụ na -arụ ọrụ. N'otu oge ahụ, netwọkụ mmekọrịta bụ nke kacha enwe mmekọrịta mgbe Facebook gachara, yabụ ọ nwere obodo na -arụsi ọrụ ike, nke nwere ọtụtụ nde ibe yana profaịlụ nke ya. Ka o sina dị, enwere ọtụtụ ụzọ ọzọ dị mma maka netwọkụ mmekọrịta a, na oge a anyị na -ekwu maka ihe kacha mma taa.
1 Instagram dị ka netwọkụ mmekọrịta na 2021
2 Ndị a bụ ụzọ kachasị mma maka Instagram taa
Instagram dị ka netwọkụ mmekọrịta na 2021
Dị ka anyị kwuru, Instagram bụ otu netwọkụ mmekọrịta ama ama n'ụwa. Ụfọdụ data ya ndị ọzọ, ụfọdụ na -atọ ụtọ ma, n'otu oge ahụ, na -achọ ịmata, nke dabara na 2021, na -ekwupụta na 71% nke ụlọ ọrụ na ụdị nwere ibe na Instagram na / ma ọ bụ kpọsaa site na ya, yabụ ọnụnọ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ abụghị pụtara ìhè site na ọnụnọ ya na netwọkụ mmekọrịta a.
N'echiche a, ihe dị ka 80% nke ndị ọrụ na -eduzi nke ukwuu n'ihe ha na -ahụ na Instagram iji kpebie ịzụta ngwaahịa na ọrụ ụfọdụ, opekata mpe 50% nke ndị ọrụ bụ ndị na -eso azụmaahịa, akara ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ihe ọzọ bụ na 80% nke ndị ọrụ na -achọpụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọhụrụ, ekele niile maka mgbasa ozi nke ikpo okwu na mmekọrịta nke ibe ọ bụla na profaịlụ jisiri ike nweta n'ime Instagram.
N'aka nke ọzọ, nkezi onye ọrụ nwere oge ojiji nke nkeji 53 kwa ụbọchị. Enwekwara ihe dị ka nde mmadụ 500 na -eji Akụkọ Instagram kwa ụbọchị. Ihe ọzọ ị ga -ahụ bụ na 71% nke ndị ọrụ Instagram dị afọ 35 ma ọ bụ karịa, yabụ na obodo ha dị obere.
Ndị a bụ ụzọ kachasị mma maka Instagram taa
Ugbu a, anyị na -eji ụzọ ọzọ kachasị mma na Instagram nke oge a. Anyị malitere!
Pinterest bụ netwọkụ mmekọrịta ọzọ ama ama na ebe niile n'ụwa. Nke a dabere na mmekọrịta nke ọdịnaya site na foto na onyonyo n'otu ụzọ ahụ na Instagram, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ọzọ nke na -ekewa ya na ọtụtụ akụkụ. Na, ịmalite, Pinterest na -eme ka o kwe omume ịmepụta na jikwaa onyonyo na ọdịnaya ọtụtụ n'ime ọtụtụ bọọdụ onwe onye, ​​nke ọ bụla nwere isiokwu ịchọrọ, ma maka ihe omume, oge, ọdịmma na ihe ndị ọzọ.
Mmalite ya sitere na 2009, afọ nke ewepụtara ya. Kemgbe ahụ, Pinterest achịkọtala, maka afọ a 2021, ihe dị ka nde mmadụ 450 na -arụsi ọrụ ike kwa ọnwa, yabụ, ọ bụ otu netwọkụ mmekọrịta na -eto nke ukwuu n'afọ ndị na -adịbeghị anya ma nwee nnukwu obodo, ma ndị ọrụ nkịtị ma ndị nrụpụta, ụlọ ọrụ, ụdị dị mkpa, gamers na ụdị mmadụ niile. Maka nke a na ihe ndị ọzọ bụ na Pinterest bụ ezigbo nhọrọ maka Instagram na 2021.
Tumblr bụ ihe ọzọ ama ama netwọkụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Mwepụta ya mere na 2007, yabụ na ọ bụkwa otu n'ime ogologo oge na -agba ọsọ, ọ bụ ya mere o ji nwee ọtụtụ mgbanwe ịchọ mma nke megharịrị ọhụụ nke interface ya.
Nke a bụ netwọkụ mmekọrịta dịtụ iche na nke anyị na -enwetakarị na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ na -ahụkarị, ebe ọ bụ site na microblogging. N'ihi nke a, ndị mmadụ ma ọ bụ ndị ọrụ na -eji ya na -ebipụta ọdịnaya na -atọ ụtọ, yana ederede, onyonyo, vidiyo, ọdịyo, nhota na njikọ na isi mmalite dị iche iche.
Naanị afọ gara aga, ọ debara aha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde nde 500 edepụtara, si otú a na -edobe onwe ya dị ka ihe ọzọ dị mma maka Instagram na nke ama ama.
N'etiti ọtụtụ uzo ozo na Instagram nke enwere na 2021, ọzọ nke bụkwa otu n'ime ihe kacha atọ ụtọ na, ya mere, o nwere ohere kwesịrị ekwesị na post mkpokọta a bụ Flickr, netwọkụ mmekọrịta nke ewepụtara na 2004, n'otu afọ ahụ Facebook nwere mmalite ya na mahadum dị na United States; ọkachasị, na Harvard.
Flickr bụ ikpo okwu na netwọkụ mmekọrịta, dị ka Instagram na ndị ekwurula, bụ n'efu. Agbanyeghị, ọ na -enyekwa akaụntụ ịkwụ ụgwọ dị elu, nke bụ Pro; Ndị a nwere ikike nchekwa na -akparaghị ókè maka foto na vidiyo, ebe ndị nweere onwe ha, dịka ị nwere ike iche, nwere oke oke na ngalaba ahụ.
N'aka nke ọzọ, na Flickr ị nwere ike ijikọ onyonyo na echiche, n'etiti ihe ndị ọzọ, site na ọba na ihe ndị ọzọ. N'ezie, ọ na -enye ohere mmekọrịta nke ndị ọrụ ya na obodo ya n'ụzọ sara mbara site na arụmụka na ụdị mgbanwe echiche na ọhụụ niile.
Isi ihe na -adọrọ mmasị na Instagram metụtara ihe onyonyo yana ụzọ enwere ike isi kesaa ya ma nye ndị ọrụ ndị ọzọ nọ n'ụwa ohere. Nke a bụkwa ebumnuche 500px, mana ebe a ihe na -agbanwe ntakịrị, n'ihi na ikpo okwu a abụghị netwọkụ mmekọrịta dị ka nke a.
N'ezie, na 500px ị nwere ike banye ngwa ngwa na sekọnd na -enweghị ịmepụta akaụntụ dị ka nke a, n'ihi na enwere ike ime ya na Facebook, Twitter na Google+. Agbanyeghị, ọ bụ ikpo okwu amachaghị nke ọma karịa nke ndị gara aga, yabụ, o nwere, n'ihe banyere nde ndị ọrụ, obodo pere mpe.
N'ikpeazụ, anyị nwere VSCO, ngwa nwere arụ ọrụ yiri nke ahụ na Instagram na -enye gị ohere idezi onyonyo na vidiyo, na ekwentị gam akporo na iOS. Ikpo okwu a nwere ihe pụrụ iche na ọdịnaya dị na ya, n'ozuzu ya, na -enwekarị nkọwa na nka, yabụ, n'otu ụzọ ahụ Pinterest, ndị ọrụ ya na -elekwasị anya na ibugote ọdịnaya n'ogo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » 5zọ kachasị mma maka Instagram
Otu esi etinye gam akporo na VirtualBox ma nwee ọ gamụ na Android na PC